Tsy fahampian-drano : HITA NY VAHAOLANA -
AccueilRaharaham-pirenenaTsy fahampian-drano : HITA NY VAHAOLANA
Efa nosokafana ny “van” lehibe mitondra ny rano avy any Tsiazompaniry mankaty an-drenivohitra. Efa omaly no nanatontosana izany, hoy ny avy amin’ny minisiteran’ny Rano. Tsy tokony hanana ahiahy amin’ny famatsian-drano ny rehetra. Efa hita ny vahaolana. « Hilàna fanitsiana ny fanazavana mba tsy hiteraka olana, tsy tokony hisy ny ahiahy ary mbola tsy ho tapaka mihitsy ny rano mamatsy an’Antananarivo renivohitra ao anatin’ny 1 volana na tapa-bolana, efa misy ny fandraisan’andraikitra nataon’ny avy amin’ny fitondram-panjakana manoloana ny olana », raha ny fanazavana nentin’ny minisitry ny Rano Roland Ravatomanga. Nosokafana ny fefiloha ao Tsiazompaniry ary ny rano ao amin’io toerana io no hameno ny ao Mandroseza mba tsy hisian’ny fiatoana eo amin’ny famatsian-drano eto Antananarivo renivohitra. Tsy mora ny olana miseho raha ny fanazavana nentin’ny minisitra hatrany, saingy tsy mitavozavoza manoloana ny toe-draharaha ihany koa ny fitondram-panjakana ho amin’ny fitondrana vahaolana. Mahatratra 3 000 m3 no havoakan’ny fantsona iray avy ao Tsiazompaniry, mahavita ny famatsiana eto Antananarivo izay 3 000 m3 izay. Mbola tsy nisokatra ny fatson-drano efatra ambiny, tsy ahiana mihitsy ny mety atapahan’ny famatsian-drano noho izany. Nampihorohoro ny rehetra ny fitosahan’ny vaovao mahakasika ny fatapahan-drano, be sahady ireo mpanararaotra, tsy tokony hikorontana kosa ny vahoaka raha ny nambaran’ny minisitra hatrany. Raha vao ny alatsinainy teo no nahenoana ny vaovao mahakasika ny mety hisian’ny fatapahan-drano, dia efa feno mpanararaotra sahady.
Misy sahady ireo mpanararaotra…
Misy mivarotra amin’ny vidiny 70 000 Ariary hatramin’ny 90 000 Ariary ireo sinibe manga fanangonan-drano, endrika fanararaotana. « Aoka tsy hisy hanana ahiahy ny rehetra » hoy hatrany ny minisitra. Nisy ny fihenan’ny farihy rehetra sy ny rano tao anatin’ny andro vitsivitsy izao, avy hatrany dia nandray andraikitra kosa ny fitondram-panjakana ka nitady vahaolana. Azo ampiasaina avy hatrany ny rano izay notaritina avy ao Tsiazompaniry ny Alakamisy ho avy izao raha ny fanazavana nentin’ny minisitra. Mbola maharitra hatramin’ny fiafaran’ny herinandro kosa anefa ny ambin-drano ao Mandroseza , mifameno noho izany ireo rano, entina hisorohana ny mety ho fatapahan-drano. Tsy maintsy avela ao Mandroseza tapak’andro ny rano mba hisian’ny fanadiovana. Vahaolana vonjimaika ny fanokafana ny rano ao Tsiazompaniry, vinavinaina hirotsaka kosa ny orana ny fiandohan’ny herinandro ho avy izao. Raha toa ka tsy misy ny firotsahana, dia hirotsaka amin’ny fandatsahana ny orana artifisialy. Ny fandatsahana ny orana artifisaly izay hilana fepetra, toa ny fisian’ny andian-drahona. Misy koa ny fikaonan-doha izay notanterahin’ny minisitera isan-tsokajiny ny amin’ny fiatrehana ny olana toa izao ahafahana mitondra vahaolana vonjimaika sy lavitr’ezaka. Anisan’ny voakasiky ny antso atao amin’ny fiatrehana ny olana ihany koa ny olom-pirenena tsirairay. « Mandrora mitsilany isika, vokatry ny doro tanety sy ireo tavy no mahatonga ny haintany » raha ny fanamafisana nataon’ny minisitra.